BUDDHIST TERMS' Dictionary: PROXIMITY CONSCIOUSNESS - ဥပစာရ
PROXIMITY CONSCIOUSNESS - ဥပစာရ
PROXIMITY CONSCIOUSNESS Upacᾱra
ဥပစာရ - ဥပစာစိတ်၊ ဈာန်, မဂ်, ဖိုလ် - ဟူသော အပ္ပနာ၏ အနီး၌ ဖြစ်သောစိတ်။
အိမ်, ကျောင်း, ရွာ စသည်တို့၏ အနီးအနားကို အိမ်ဥပစာ၊ ကျောင်းဥပစာ၊ ရွာဥပစာဟု ခေါ်သကဲ့သို့ ဈာန်, မဂ်, ဖိုလ်တို့၏ အနီး၌ဖြစ်သော စိတ်ကို ဥပစာစိတ်ဟုခေါ်သည်။
It is termed the proximate consciousness as it occurs in the proximity of the attainment of the appropriate Path Consciousness. Just as the proximity ofahouse oraschool oravillage is called upacᾱra, the proximity of attainment of Jhᾱna, Magga and Phala is called upacara.
See PREPARATION : ADAPTATION : LINEAGE,
CHANGE OF : PURIFICATION.